कोरोना संक्रमित पतिलाई मुखबाट सास दिएर बचाउने पत्नीको प्रयास ! – Sapana Sanjal
कोरोना संक्रमित पतिलाई मुखबाट सास दिएर बचाउने पत्नीको प्रयास !
April 26, 2021 150
Sapana Sanjal : भारत अहिले विश्वमै कोरोना महा मारीबाट सबैभन्दा बढी पीडित भइरहेको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली नै यतिबेला डमाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ।
देशभर अक्सिजन सिलिन्डर नभएर हाहाकार मच्चिएको छ भने बिरामीले एम्बुलेन्स पाउन सकिरहेका छैनन्। मानिस ठेला गाडा र रिक्सामा अस्पताल जान बाध्य छन्। अस्पताल पुगे पनि बेड नपाउँदा संक्रमित म र्न बाध्य भइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँका भयावह तस्बिर तथा भिडिओ भाइरल भइरहेका छन्। यसै क्रममा एउटा यस्तो हृदयविदारक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ, जहाँ एक महिला आफ्ना पतिलाई बचाउन मुखमा मुख जोडेर श्वास दिइरहेकी छन्।
यो तस्बिर ट्विटर प्रयोगकर्ता @SamarRaj ले सेयर गरेका हुन्।
क्याम्पसनमा उनले लेखेका छन्, ‘छुँदा पनि फैलिने रोगमा सासबाट सास दिने हिम्मत गर्नु मुर्खता त हो तर प्रेम विवश र लाचार छ, आफ्नालाई बचाउने अन्तिम प्रयास हो, यस्तो अवस्थामा आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह हुँदैन।
यो समाचार तयार पार्दासम्म त्यो तस्बिरलाई ७ हजारभन्दा बढीले लाइक गरिसकेका छन् भने १९ सयभन्दा रिट्विट गरिएको छ। धेरै जना दुःखी भएका छन्।
यी महिलाले आफ्ना बिरामी पतिलाई अटोमा लिएर आगराको एसएन मेडिकल कलेज पुर्याएकी थिइन्। पतिलाई सास फेर्न कठिन भएपछि उनले आफ्नो मुखले नै सास दिने प्रयास गरेकी हुन्। तर लाख प्रयास गर्दा पनि पतिलाई बचाउन सकिनन्।
Prevसरकारले नखोल भन्दा भन्दै खोलिएको बिद्यालय की १५ वर्षीय बालिका को कोरोना ले लीयो ज्या’न
Nextकाठमाडौमा १६ गते देखि निषेधाज्ञा लागू हुँदा बैंक र सरकारी कार्यालय के हुन्छ ?
सोनिका रोकायमाथि पानीभित्रै यस्तोसम्म गर्ने को हुन् यी युवा? (हेर्नुहोस भिडियो
काँक्रो खानुका यस्ता अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ !